Christmas Gifts Fikradaha Kids: Ma waxaad raadineysaa Best ah Christmas Gifts Ideas for Kids waayo, 2016, ka dibna aad ku jirto webpage.There saxda ah waa wax ku saabsan Christmas iyo jawiga xafladda ka dhigaya naga dooneyso inay gabyaan, kulan play, gaar ahaan carruurta iyo madadaalo kaliya isagoo. Oo alaabta lagu top Christmas, fikradaha hadiyad Christmas na caawi inay sameeyaan. Marka laga da'dooda, kids jecel alaabta lagu Christmas iyo Christmas ay u ogaadaan waxa ay jidka ku soo noqon doonaa. Oo danbaynti, alaabta lagu ciyaaro ma aha kuwa xaqa for kids.
Waxaan carruurta dadka waaweyn ee doonaya in ay leeyihiin xiiso leh, aad. Waxaan rabnaa in aan qaar ka mid ah waxa on top ka 10 Christmas liiska hadiyad. Sidaas daraaddeed, waxa liiska inoo soo Christmas this? Maxaa qof kasta Doono (gaar ahaan waalidka saboolka ah) tartamaan xilli fasax this dukaamada? Waa maxay kulul, waxaad codsan? First, halkan waa xulasho oo ka mid ah alaabta lagu Christmas kulul top …
Sannad kasta tiro ka mid ah dukaamada waaweyn toy ku dhawaaqo waxa ay rumaysan noqon doonaa alaabta lagu Christmas caanka ah ee sannadka. Oo kuwa ugu caansan alaabta lagu ciyaaro Christmas waxay noqon kartaa mid adag in la ogaado. Dhab ahaan, filim kaftan ah ayaa la sii daayay dhawr sano ka hor ah ee mowduucan. Layisku Jidka la Arnold Schwarzenegger.Its oo dhan oo ku saabsan aabbe kuwaas oo uu leeyahay macnaha dhabta ah ee Christmas Day oo dhammu helay ka hor Christmas halka on search a Hadaba waayo, alaabta lagu ciyaaro kulul ee xilli ciyaareedka.
laga yaabaa in aadan jeclaan ama raacsan tahay doorashada; laakiin haddii ilmuhu isaga ama iyada dareenka saaray mid ka mid ah alaabta lagu top Christmas, wax kale samayn doonaa. Carruurta jecel yihiin in ay ku haboon oo aad samaysid waxa saaxiibadood ay qabanayaan. Waxaa loo suuq nin riyo. Waxaa sida ugu dhakhsaha badan fikradda ah alaabta lagu ciyaaro, sale ma loo baahan yahay; waxyaabaha kaliya duuli off khaanadaha – oo dhammuna way isu by.
fulinta shirkadda A ayaa sheegay in ay jiraan had iyo jeer yihiin yaraanta at Christmas, si uu talo yahay: haddii aad ogtahay waxa aad rabto in aad loogu talagalay carruurta ama kids ka dibna , waxaa hore iibsan – in uu yahay,haddii aadan rabin in ay arkaan wejigooda niyad maalinta Christmas.. Inkastoo ay funny aabbe khayaalka demented kuwaas oo isku dayo in la helo oo caan ah oo alaabta lagu Christmas raadin kartaa, i aamin, xaqiiqada dhabta ah ee naftaada helo ma aha farxad leh in xaaladda in.
Markaas in uu ugu fiican hadiyado Christmas 2016 caruurta iyo waxay bixisaa xulashada deg deg ah i ayaa u soo soocaa kala duwan halkan … Just dhex mari oo wuxuu ku raaxaysan!
Best Gifts Christmas For Kids 2016 – Hot Alaabta Christmas
1. Rip fuushanba 360 Timi Ride On
Magacaabay mid ka mid ah alaabta lagu ciyaaro wanaagsan ee carruurta dugsiga ee 2009 by Waalidiinta Magazine, classic BigWheel uu ku soo laabtay tallaabo mar kale sanadkaan la hordhaca ah ee ku joogana Rip ah 360 Timi Ride On. Riders da'doodu shan iyo kor u jeclaan doonaa sida bishkleetiga this Rip fuushanba 360 qodob oo soohdintooda ah mid marwalba iyo sida ay u fududahay waa in ay ku dhici. fuushanba waa drive xad ah iyo taayirada danbe ee isku shaandheyn jidka oo dhan ku wareegsan. bishkleetiga Tani, ka duwan ay ka horreeyay, ayaa jir bir ah sida ka soo horjeeda jir caag ah sidaas darteed waxa ay taasi masaafo camiridda iyo macaan.
Mandiil Rip-kii fuushanaaba 360 Timi Ride-On
iXL The 6 in 1 nidaamka run ahaantii waa 6 lix qalab kala duwan oo ka mid ah oo la iman software kasta oo ka mid ah lix codsiyada baxay sanduuqa. Lixda codsiyada ka mid ah akhristaha digital, ciyaaryahanka kulanka, buugayga, workshop, MP3 ciyaaryahan oo siladda photo. Sida VReader Vtech ah, interactive iXL System carruurta dhiiri saddex ilaa toddoba sano si ay u bartaan sida loo akhriyo iyo ballaariyaan erayada.
3. Nerf N-Strike isriixidda ECS Blaster
Si buuxda u qalabaysan clip a 6 hub iyo sidoo kale saddex 18 clips iyo hoto, ECS Nerf N-Strike isriixidda ku Blaster wanaagsan ee caruurta ka mid ah sideedii sano iyo ka weyn foosto awood deg deg ah in waxay ku xidhan tahay in ay bixiyaan oo iyaga siin saacadood oo xiiso leh daboolida noqon doonaa.
The Squinkies cupcake Surprise Bakeshop laga furi karaa si caruurta la xasho la kibis iyo dubo iyada ciyaari kara. Surprise Bakeshop leeyahay qaybo yar oo khatar halis ku mergado carruurta da'diisu yar tahay saddex sanno laga yaabaa. Sidaas saaraha, daradii Alaabta, la taliyaa cupcake Squinkes ku Bakeshop ee caruurta afar sano iyo ka weyn. Bakeshop Squinkies wuxuu ka shaqeeyaa by jeestay oo gashan qadaadiic ah oo wuxuu galay cupcake button play iyo in Squinkies cupcake yaabay Bakeshop ah.
Daradii Squinkies cupcake Surprise Bakeshop (Recolor)
5. Gabya-A-Ma-Jigs!(Christmas Gifts Fikradaha Kids)
Sida saxda ah waa waxa a gabya-a-ma-Jiga? Well, a gabyi-a-ma-Jig waa hal xubin ka mid ah ayaa u gabya-A-Ma-Jigs! ™ group of characters. Oo waxay magicii toy waa badnaayeen ah
description. A gabyi-a-ma-Jig waa Brygge yar, alaabta lagu ciyaaro squeezable dheer oo ku saabsan toddoba inches, in “gabyaa” marka aad ku socon on iyada caloosha. u muuqataa doqon? waxay noqon kartaa. Laakiin waa madadaalo? Shaki kuma jiro waxa ku saabsan. Sidaas kulmi gabya-A-Ma-Jigs! ™ si ay ula qabsadaan –wax soo saarka smart la magac smart. Soo bandhigay guga ee 2010, kooxdan oo ah Tumid, characters zany – abuuray by qeybinta Mattel ee Fisher-Price – hubaal doonaa dhoola on wajigaaga iyo farxi ilmo kasta. The gabya-a-ma-jigs yabooho in ay noqon mid ka mid ah alaabta lagu ciyaaro ugu caansan ee sannadka.
Mattel The gabya-A-Ma-Jigs Duets – Red leh eey yar
6. Truck iyo cagaf(Christmas Gifts Fikradaha Kids)
Mid ka mid ah alaabta lagu Christmas kulul, ka Truck iyo cagaf waa gaari drive afar-wheel a in xamili karaan nooc kasta oo dhul. Waxaa qoreysa sagaal-inch socdeen giraangiraha iyo weyn jirka dheer laba-foot. The cabbir dhabta ah ee this mashiinka cagaaran la yaab leh waa 28.6 inches by 19.4 inches by 18.2 waxa ugu weyn oo ugu fiican laakiin. Talinayaa in da'doodu lix iyo ilaa, ka Truck iyo cagaf kaliya dhici doonaa ilmahaaga subaxnimadii Christmas.
John Deere ciideed Vehicle 2CV, Truck iyo cagaf
7. Justin Bieber caruusadaha sumcad
Mid ka mid ah dareen ugu kulul gabay adduunka music guriga aadi kartaa oo aad la fasaxyada ku dhex Bieber Justin ah heesaha Collection Dolls.Justin Bieber Doll waa durba hogaanka 10 Christmas alaabta lagu liiska. Waxaa hubaal noqon doonaa mid ka mid ah alaabta lagu ciyaaro ugu caansan ee gabdhaha ay da'doodu u dhaxayso lix ilaa 15 sano jir xilli fasax this.
The Bridge Direct Justin Bieber caruusadaha sumcad
8. Da'day Truck Qashinka ah
Ku biirista line xiiso dhiibsan Big Buddies Rig ee alaabta lagu interactive sanadkan ee da'day Truck Qashinka ah. Carruurta saddex sano iyo wixii ka weyn jeclaan doonaa xaqiiqda ah in da'day Truck Qashinka waa oversized oo si sahlan loo cadaynayo qaybaha in guurto qol da'day ee, giraangiraha iyo dhaqdhaqaaq jirka. Waxay jacayl dhici doonaa shaqsiyad koxda of toy this iyo in ka badan 90 weedho xariif ah iyo codadka.
Dhiibsan da'day Truck Qashinka ah
9. yaxaas Bigfoot(Christmas Gifts Fikradaha Kids)
Fisher-Price Image Big Foot yaxaas soo socda:Waa weyn oo u diyaar u ah in ay hab gurigaaga iyo wadnaha ee ilmahaaga waa: Monster.Bigfoot Bigfoot yimaadaa si nolosha la hago wireless waxaa ka mid ahaa. Waxa uu noqon karaa hurdo, cadhoodaa, ku faraxsan, ama murugo. Bigfoot socon kartaa, hadal, calyanaqsiga, daaci oo ku tuuraan kubada a. Wuxuu kuu sheegi doonaa marka uu diyaar u yahay kubad waa, odhan weedho sida “Play”; andhe tuuri kartaa kubada for fun xitaa more. tiradaasi tallaabo bahal Bigfoot ayaa siyaabo uu bartay, oo had iyo jeer waxay bixisaa edeb a “iga raali ahow” marka aad daaci intay daabka ka baxay. Waxaad isaga ma jeclaan doonaa marka uu cadhooday, laakiin sida Fisher-Price Bal qiyaas BIGFOOT soo socda yaxaas.
10.Kung Zhu Hamsters(Christmas Gifts Fikradaha Kids)
Kung Zhu Hamsters waxaa ay noqon doontaa sida weyn xilli ciyaareedkan sida ka horreeyay, waxay, Zhu Zhu ah Xayawaanka ahaayeen weyn sannadkii hore; iyo waa ay fududahay in la arko sababta. Dhab ahaan, waxay hore u dhigtay hogaanka 10 alaabta lagu ciyaaro kulul qor xilli fasax this. Si ka duwan ka hamsters cute iyo toliinka Zhu Zhu, Kung Zhu Battle Hamsters yihiin mashiinada dagaal kulul. Waxay leeyihiin muuqaalka ah edgier la marsho dagaal iyo dagaalka hubka u. Waxaa jira laba nooc oo kala duwan oo Kung Zhu Battle Hamsters, group Ciidamada Gaarka ah iyo koox Ninja Warrior. hal koox oo keliya ayaa ku guuleysan doona haddii ay ula dagaalamaan inay aakhirkeedu wuxuu u qadhaadh.
11. Love House(Christmas Gifts Fikradaha Kids
Waxaad ka heli doontaa wax walba oo aad aragto guriga wacan xoolaha, kuwaas oo ay dhacdo Townhouse Calico critters ah. townhouse lagu rakibay afar qol nool, cunista ama nasasiiyay. Dhammaatay carruurta da 'saddex iyo wixii ka sareeya, Townhome Calico critters siinayaa kulan hal abuur leh ee ilmo kasta. Townhouse critters waa toy aad u fiican oo qiyaastii muddo waqti dheer ah. Critters Calico waxaa lagu iibsan karaa in nooc ama qoysaska. alaabta lagu ciyaaro Kuwani dhaxayn orso, eeyaha, rahyo, bisadaha, jiir, bakaylaha iyo qasan more. Waxaad badbaadin kartaa ugu jecel yahay qoyska diiran dilaa ah xoolaha Calico critters Townhome iibsiga.
12. Cuponk!(Christmas Gifts Fikradaha Kids)
ku waxa? Cuponk! Waa ciyaar in la ciyaari karo by dadka da'da ah oo dhan, inkastoo saaraha talinayaa shan sano jir iyo wixii ka weyn; iyo waxa ay noqonayaan caan ah sida wajiyada xilli fasax. Sameeyey by Hasbro, waxaa jira dhab saddex qeybood oo kala duwan oo ah kulankaan: Cuponk ah! – Gorillanator, Cuponk! – El Campeon iyo Cuponk! – kulan R.I.P ha. Haddii aad jeceshahay inaad ka TV ama kombiyuutarka in muddo ah iska heli carruurta.
Cuponk! – Gorillanator la Musiibada
13. Qoob ka ciyaarka Star Mickey(Christmas Gifts Fikradaha Kids)
Qaadashada calankooda inay soo bandhigto sare cusub dheer ee Dance Star Mickey u toys Fisher Price qoyska, Fisher Price ayaa ku guuleystay kale xilli fasax this. Qoob ka ciyaarka Star Mickey horeba waa on top ka 10 liiska alaabta lagu Christmas kulul. Waxaa ugu dhaceen Mickey Mouse toy weligiis iyo waxaa loogu talagalay carruurta ka 18 bilood ilaa lix sano jir. Fisher Price Dance Star Mickey Socon, wadahadal, gabyaa iyo qoob in noocyo kala duwan oo grooves cusub. Waxaa jira guud ahaan lix kuwan raadkaygay, oo ay ku jiraan heeso ah “Rux Your Wax jeexdin” iyo “Hel Up Offa wax”, iyo sidoo kale tiro ka mid ah qoob kala duwan oo ay ku jiraan moonwalk caanka ah ee Michael Jackson.
Qoob ka ciyaarka Star Mickey Fisher-Price Disney ee
Isa Leapster Explorer System Learning Game qalabka ciyaaraha Xararad in loogu talagalay in lagu ballaariyo on xirfadaha in carruurtu ku bartaan dugsiga iyo hab xiiso leh si ay u sii qabsadaan oo wax maalin kasta oo cusub oo xiiso bartaan. Waxa la abuuray by marti for kids 4-9. Iyada oo Explorer Leapster ah, carruurta ku raaxaysan karaan barashada la characters ay jecel yihiin sida Dora Explorer iyo The pingvin ee Madagascar. kulan The baro xirfadaha sida xisaabta, reading, codadka, juqraafiga, sayniska, music iyo marti Leapster Explorer Learning Game System (Green).
Marti Leapster Explorer Learning Game System Green
15. Spy Net Video Watch(Christmas Gifts Fikradaha Kids)
The Spy Net Video Watch dhab ah u shaqeeya camera video iyo makarafoonka in ay u qoraan karaa ilaa 20 daqiiqo video iyo dhawaaqa. tayada oo ka mid ah wax lagu qoro oo loo maqli karo waa la yaab wanaagsan oo ku salaysan baaxadda sheyga. The Spy Net Secret Mission Video Watch, waxa kale oo aad sawirada qaadan kartaa sidii waqti dhacay sawiro. saaraha aan loogu tala galay caruurta da'doodu ka yar tahay siddeed sano talinayaa. Ka buuxaan muuqaalada basaas-teknoolojiyad sare, feature a in runtii u taagan Spy Net: Secret Mission Video Watch.
16. Hot Wheels R / C qarsoodi fuula, Car Racing
Carruurta sideed sanno iyo wixii ka weyn raaxaysan doonaa Wheels Hot ee R / C qarsoodi fuula Racing Car horrayn sababtoo ah xawaaraha, karo iyo fududaato in la isticmaalo. sidaas oo kale, Hot Wheels ayaa baxsad guriga la-laabanto cusub, baabuur jeebka yimaa- – kaliya waqtiga fasaxa. The Hot Wheels R / C qarsoodi fuula Racing Car waa saddex-inch gaari tartanka mini kuwaas oo laalaabka iyo gudbiye haysta isku darka / baabuur fog. baabuurta Inta badan fog ay gacanta in this category ka kooban gudbiye gaar ah bur burka RC; iyo in uu yahay waxa ay ka dhigeysaa qarsoodi ah u fuula Racing Car sida R cusub / C alaabta lagu ciyaaro.
Hot Wheels R / C qarsoodi fuula, Car Racing – Red
Are you interested in making nice looking Dareemay Ornaments snowmen xilli ciyaareedkan, ka dibna aad ku jirto bogga midig.Dareemay Ornaments snowmen: Soo kuwan snowmen appliqued cute in nolosha la mindi daabac fudud iyo dareemay midabo iyo dhar. Waxaad dooran kartaa wax sharraxsan,, bakoorad nacnac, oo shabag ama hadiyad fasaxa wixii Ornaments baraf friend.Felt snowmen
Qalabka (saddex sharraxdid)
nidaamyada snowmen (Waxaad ka raadin kartaa online and download)
02-01 March / 2-Khaanadaha inch of cawl madow dareemay (wallpapers)
02-01 March / 2-Khaanadaha midabka inch kasta dareemay (backings)
9×12-piece of inch dareemay cad (snowmen iyo nacnac usha)
Duugga ah orange dareemay (sanka)
Haraaga dareemay cagaaran (koofiyadaha iyo wax sharraxsan,)
Haraaga buluug cirro dareemay (wax sharraxsan,)
Haraaga dhar daabacaadda (cimaamado)
thread tolidda: cad, cagaaran, cas, buluug light, cawl madow
cirbadaha: Wax tolidda, daabac
Biyaha calaamadeysanayaan L
thread daabac: bunni, madow, cad, dahab, cas
3 pom-poms yar oo cas
3 6-xabbadood inch ah qoofalan for murriyadihii
Qaabab Goo (Dareemay Ornaments snowmen)
Download the free pattern and traces from the web with white paper; cut 1/8 inch ka baxsan khadadka calaamadeeyay. Kaarta qaab kasta oo midabka saxda dareemay ama dhar. Jarjar qaabab on khadadka baafinta.
Iyadoo lagu tilmaamayo jaantuska sawir iyo meelaynta on your hannaankii, gelin snowman a on dareemay kasta oo madow cawlan 2-1 / 2-square inch; pin. Under cidhifyada snowmen 1/8. Isticmaalka irbad iyo dun caddaan, gacanta applique snowmen ee asalka.
Koofi on madaxa snowman kasta. Under geesaha 1/8 inch oo u isticmaali tolidda cad dunta hat kasta si madaxa iyo applique asalka. Ku celi, waayo, sanka iyo safaleeti for applique snowman kasta.
daabacdaa naqshado(Dareemay Ornaments snowmen)
Iyada oo gargaar ah falaadha biyo-L a iyo tixraac jaantus meelaynta, indhaha, afka, hubka, iyo gacmaha qaadashada of decoration kasta. Isticmaalka laba qaybood ee xasawda madow, gelin gunti a Faransiis il kasta. Isticmaal xasawda madow iyo mindi gaaban socda agagaarka afka Micida kasta. Isticmaal saddex qaybood ee xasawda brown dib iyo gacmaha Tolmada.
Jago ama bakoorad nacnac shabag snowman sara kiciyey gacan ku xusan, ama booska uu ka quruxda oo kaliya hoos gacanta sara kiciyey. Under geesaha dareemay 1/8 inch iyo isticmaalka habboon thread tolidda Noqtay applique in asalka.
Isticmaal lix qaybood Xariir cas iyo mindi si toos ah si ay u sameeyaan oo karbaash on usha nacnac.
Waayo, wax sharraxsan,, isticmaalaan laba qaybood ee backstitch a diillinta dahab xasawda on sare iyo hoose ee quruxda. Kafaa'iidaysiga laba qaybood oo ah dunta guduudan saddex mindi cross badan bartamaha quruxda. Isticmaal labada qaybood ee xasawda madow on jillaab ku dambeeya wax sharraxsan, dhejiya ilaa agagaarka farta snowman a.
Isticmaal laba qaybood Xariir dahab iyo mindi si toos ah u dhejiya oo karbaash on collar. Isticmaalka strand gaaban dunta oo dahab ah, qaado wax yar mindi a sare ee shabag, xarunta Tolmada on adag, iyo ka saar irbadda. strand Linker in qaansada yar; falinjeeerka darafyadiisa dhererka la doonayo. Haddii la doonayo, aamin xafiiltamaan dhexe tolmo maankiisa yar.
Isticmaalka dun guduudan tolidda, dhejiya pompon a on top of hat kasta. Isticmaal lix qaybood ee xasawda cad kuus kuus Faransiis dhejiya sooc asal kasta, tegaayo xadka dhaggan 1/8-inji ah hareeraha ku laayeen baxsan asalka.
Dhammaystir Ornaments(Dareemay Ornaments snowmen)
Pin square ah daabac on square ah dib u dareemay. qoofalan Pin dhamaado dhexeeya layers on top of sharraxsan kasta. Isticmaal xabbadood tolo silig cawl madow wada, Tolmada 1/8 inch ka laayeen kasta. Iibsiga Waayo jeeg more
Ornaments jeclaysto snowmen